Sii Hinaafsisuuf kan Biraa Jaaladhee - Xalayaa Jaalalaa
Dhiifama naa godhii Mangee koo
Akkam fayyaa jirta? Nagaa keeti? Jaalallee koo kan akka lubbuu kootitti sijaaladhu Mangistuu dhaaf. Mangee koo, jaalallee koo yeroon sin jedhuu sitti hin bitaacha’iin. Ani har’as baayyen sijaaladha. Akkamitti najaalatta nan hin jedhiin. Kun sammuu koo na dhukkubsa. Mangee koo, Har’a kaniin Xalayaa siifbarreessuf barbaadef badii anii sirratti dalage waan boqanna nadhowweef dhiifama akka naaf gootufi. Mangee koo kunoo jajjabaadhen dhiifama sigaafadhe, waanan baayye sijaaladhuufi. Balleessun waanuma jiru garuu, anii waanan balleessu hin qabne balleesse. Nan amana Mangee koo dirqamaan dhiifama naa godhi siniin jedhu. Garuu, keessi koo boqannaa haa argatuu jedheetan xalayaa kana siif barreesse.
Ergan sababa badii kootin sirra adda ba’e kaase ji’oota muraasa ta’us, dhugaa rabbi Mangeekoo na amanta yoo ta’e erga gaafa sirra adda ba’eeti kaase keessi koo boqanna hin qabu. Halkan hin rafu, guyyaas hojii dhiiseera. Waa’e dhuma kee boosen baasa. Maalif akkan badii akkasii sirratti hojjedhe anaaf iyyuu ifaa mitii. Mangee koo adaraa jaalalaa dhiifamuma kee nabiraan gahii. Maaloo kaa Mangeekoo, dhiifama kee yoon argadhu baadhe waanuma baxalumatti lubbuun koo nakeessa baatu natti fakkaata. Otoo akkas ta’e gaarii ture. Amma sin mufachiisuu, du’a filadha! Yeroon akkas sin jedhu soba sitti hin fakkaatin. Isuma dhuguma natti dhagahameera.
Mangee koo, dhugaa dha nama nama jaalattuufi namaaf amanamu mufachiisun badii guddaa fi kan araaramna hin qabne ta’usaa nan beeka. Garuu, badii ofii amananii dhiifama yoo gaafataniis, rabbiis namniis namaaf dhiisa. Kanaaf dhiifama sigaafadhe.
Mangee koo, anaaf jettee waan baayye taateetta. Sababa kootin maatii kee waliin wal dhabdee, obbolaan kee sijibbanii waa hedduu taatetta. Ati anaan caalciftee jaalala kootif bakka kennitee sana waliin wal lolte. Anii garuu, waanuma hin taanen sirra adda bahuuf filadhee simufachiise. Mangeekoo, waan ani baayye sijaaladhuuf simufachiise natti fakkaata. Yeroo gaafa tokko tokko taa’e yaadu, ati waan baayye naaf goota olmaa baayyees narraa qabda. Garuu, maalif akkas nan goone jedhee waanuma xiqqoo dhaf sitti dheekkame sin lolee lammafa nabira hin taa’in sin jedhe.
Sihinaafsisuuf immo hiriyaa kee waliin jaalala jalqabe. Mangeekoo, natti fakkaate tanan akkas godhe. Anii garuu sijibbeeti miti. Kana naaf hubadhuu. Anii hiriyaa kee sana jaaladheeti miti. Dhugaa sitti himuudhaf akka ati hinaaftuufi. Mangee koo, amma onnee koo qulqulluun sitti dhufa. Atiis onnee kee qulqulluun dhiifama kee nabiraan gahii. Aniif ati walitti araaramne jaalala keenya isa dhugaa sana akka haara’atti jalqabna. Maaloo kaa mangee koo, badii anii sirratti hojjedhe hirriba nadowwee halkanii guyyaa najeeqa jira. Jechuma tokko sirra barbaada dhiifama siif godheera jecha jedhu. Isaaf abdii dhan si eega.
Mangee koo sin jaaladha tole? Sin eega jira. Fuula Xalayaa Jaalalaa ergaa kee nabiraan ga’u dandeessa. Jaalallee kee kan simufachiiste sirra adda baate, Burtukaane. Godinaa Qeellem Wallaggaa magaala Dambi Doolloo irra.
Jaalallee koo kanan mufachiise Mangistuu dhaaf!
Jaalalli dhugaan onnee namaa keessaa altokkoon hin baduum! borsaa seetemo?